Tahaka ny fakan-tserasera: tahaka an'i Mudar ao amin'ny Novo Domínio Sem Perda de Classificação
Azonao atao ny mametraka ny fitaovana ampiasaina amin'ny domicile izay misy ny maimaim-poana ho an'ny mpampiasa. Ianao, talvez, ianao no mipetraka amin'ny anarana sy ny fomba amam-panaovana ny tranonkala. Misaotra, tompon'andraikitra amin'ny tranonkala ho an'ny tranonkala iray hafa izay mamaritra ny fikajiana ny valim-pikarohana.
Ryan Johnson, manam-pahaizana manokana Semalt Dieny Digital, dia miresaka momba ny mozika na ny tranonkala izay manadino ny fanasokajiana azy.
Ho an'ny olon-kafa dia afaka misolo tena ny fiarovana ny tontolo iainana, ary mety hampiova fo ho an'ny antitra - build logo online. Ny tena manan-danja dia ny fiarovana ny fiarovana an-trano. Amin'ny endrika hafa, ny olona dia manamarina fa ny tena zava-dehibe dia ny maha-zava-dehibe anao.
Tsindrio ny tenin'ity tranonkala ity fa tsy misy famaha olana ny olana misy any an-trano. Ny Google Webmaster Tools dia manome ny tranonkala vaovao. Misy pejy afaka manazava ny erroso. Ny fampiasana ny fitaovana maoderina ilaina, maimaim-poana ny fiovana ilaina ary ny fanamafisana ny famerenana indray ny reconsideration. Raha fantatrao ny etimôlôjian 'ity teny ity mba ampio ilay izy azafady araka ny toromarika misy eto.
Ny safidy momba ny SEO dia mandoa vola amin'ny fifaninanana ho an'ny tranokala hafa mba hampitomboana ny fiantraikany amin'ny valin'ny fizarana. Eo am-pelatanana, miaro ny tranokalam-pifamoivoizana ao amin'ny sehatra misy anao. Amin'ny alàlan'ny fanontam-pirinty 301 dia mametraka Google amin'ny toerana misy ny fifanarahana. Ny boky fiantsoana an-tserasera dia manaparitaka ny rafitra fiarovana rafitra fiarovana.
4..Redirecionar permanentemente as páginas antigas
Configuración 301 constatación para la arquivo. Accesorios para guarar que las visitantes de Google e la situação encontrar un novo domínio. Ny laharam-pifidianana dia manosika ireo tompon'ireo tompon'andraikitry ny duplicate fifanekena. Amin'ny alalan'ity pejy ity dia misy 404 pejy ny fifandraisana amin'ny hafa amin'ny tranonkala. Alefaso imailaka amin ny namana endriny atao pirinty Fitetezana ny wiki Fandraisana Wikipedia finday Pejy rehetra Pejy vaovao Pejy kisendra Fikambanana Fikambanana Toerana iombonana
5. Informe o Google do movimento
Ireo fanavaozana ireo dia informatika amin'ny sehatra mahaleotena momba ny tokantrano. Também é uma boa idéia enviar uma notificação de mudança oficial. Ny adiresy maimaim-poana dia mamaritra ny tranonkalan'ny Google Maps ho an'ny webmasters. Etsy ankavanana dia manome antoka fa ny 301 dia ny faharesen-dahatra fa ny Google dia mametraka solika mba hanovana ny endriny.
Sitemaps HTML dia manampy amin'ny alalan'ny Internet, mahita ny XML tranonkalan'ny tranonkala, ny ankafiziny, ny fiara fitaterana. O Google dia mamerina ireo adiresy URL ateraky ny aterineto. Ny an-tranonkala dia mamaritra ny adiresy URL ao amin'ny antigos. Porofo, fa ny fampisehoana dia manaporofo ny faharetan'ny tranonkala eo amin'ny sehatr'asa fampiasana ny URL vaovao. Fitsipika momba ny XML amin'ny endrika hafa, ny XML-sitemaps sy sitemap Google-XML manampy ny manara-penitra.
7. Hamarino sy atoroy ny fifandraisana iraisam-pirenena sy ny entrada
Ireo fanontam-pirinty 301 dia mandrindra ny fifandraisana iraisam-pirenena ho an'ny ankolafy hafa. Ny rohy iraisam-pirenena dia nametraka ny toerana misy ny tranokalan-tseranana, na dia marika fa ireo anton-javatra ireo dia azo antoka. Além disso, les sites que ligam de la domín deixa deviar umação de seus links para nos novos, garantitos assim de una licencia de ligação indefinida.
8. Analise do Monitor
Ny fomba fiasa azo ampiasaina amin'ny sehatra dia manome toky fa ny tranokala dia tsy mahavaha ny olana. Tsy nisy na inona na inona, na ny tranonkala analytics sy ny Google Webmaster Console ary ny fifanarahana nandritra ny taona maro.
Informe sur les semaine, deuxièmeurs et les visiteurs d'e-mail sur la mudança antecipada
Manafaingana ny pejy fanovana amin'ny pejy momba ny redundancia
Dê tempo ao domínio para retomar seus níveis de pre-movimento
Ampiasao ireo lisitry ny tranonkala fampahafantarana momba ny lahatsoratra maimaim-poana